5 Hab Oo Lagu Iibiyo Waxyaabo Badan Oo WooCommerce Ah | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/5 Siyaabood oo Lagu Iibiyo Waxyaabo badan oo WooCommerce ah
5 Siyaabood oo Lagu Iibiyo Waxyaabo badan oo WooCommerce ah
Qof kasta oo raadinaya inuu ku iibiyo alaabada ama adeegyada khadka, WooCommerce waa aalad aad u fiican. Aad bay u fududahay in la isticmaalo, waxayna kaa caawinaysaa inaad kayd ka samaysato boggaga WordPress wax ka yar saacad. Weli, waxaad u baahan doontaa inaad qabato shaqo dheeraad ah haddii aad rabto in dukaankaaga e-commerce uu noqdo mid guuleysta.
Waxaa jira tartan badan oo halkaas ka jira, si fudud u dejinta qaar ka mid ah boggaga alaabta iyo habaynta goobaha aasaasiga ah ee plugin kuma filna. Si aad uga soo baxdo dadka, waxaad u baahan doontaa inaad sameyso wax kasta oo aad awooddo si aad u muujiso alaabtaada sida ugu macquulsan. Akhbaarta alaabtu waxay tahay in tani aysan ahayn mid adag in la sameeyo, oo ay jiraan xitaa qalab kaa caawin kara inaad si degdeg ah halkaas u gaarto.
Tilmaan-bixiyahan, waxaanu kugu socon doonaa shan ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu hagaajin karo badeecadaada WooCommerce, si loo dhiirigeliyo iibka badan. Aan u dhaadhacno ganacsiga!
1. Muuji sifooyinka alaabta iyo kala duwanaanta
Maalmahan, dadku waxay u muuqdaan inay sameeyaan cilmi-baaris badan ka hor intaanay wax iibsan. Marka macaamiishu yimaadaan dukaankaaga e-commerce, sidaa darteed, waxaad u baahan doontaa inaad diyaar ula ahaato dhammaan macluumaadka ay u baahan doonaan. Waxa ugu dambeeya ee aad rabto waa in ay go'aansadaan diidmada iibsashada sababtoo ah ma jiraan tafaasiil ku filan, oo beddel dukaan kale u sii.
Bilawga wanaagsan ayaa ah inaad buuxiso macluumaadka ugu badan ee aad awoodid dhammaan alaabta WooCommerce. Mid kastaa wuxuu u baahan doonaa cinwaan iyo sharraxaad, qaybaha iyo tagsyada, iyo faahfaahinta qiimaha kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, laba ikhtiyaar oo inta badan la iska indho-tiray ee bogga wax soo saarka WooCommerce waa sifooyin iyo kala duwanaansho.
Labadan gooboodba waxa laga heli karaa gudaha Macluumaadka alaabta qaybta bog kasta oo badeecad ah:
Waxaad ku bilaabi kartaa adigoo ku daraya sifada shayga, kuwaas oo ah tilmaame gaagaaban oo tilmaamaya sifooyinkiisa aasaasiga ah. Tan waxaa ku jiri kara midabkeeda, tusaale ahaan, iyo walxaha laga sameeyay. Marka lagu daro, macluumaadkan waxaa lagu soo bandhigi doonaa bogga alaabta ee macaamilku arko, isaga oo siinaya xoogaa faahfaahin degdeg ah oo muhiim ah oo ku saabsan shayga:
Kadib markaad ku darto sifooyinka, waxaad sidoo kale dejin kartaa kala duwanaansho. Kuwani waa faa'iido leh marka hal badeeco lagu bixiyo noocyo badan - sida midabyo ama cabbirro kala duwan. Waxa kale oo lagu tusi doonaa bogga alaabta, macaamilkuna waxa uu ka dooran karaa xulashooyinka ay rabaan hal ama in ka badan oo liiska hoos-u-dhaca ah:
Waxaad xitaa ku dari kartaa macluumaadka qiimaha kala duwan iyo faahfaahinta kale duwanaanshaha alaabada. Taasi waxay ka dhigaysa sifadan mid qasab ku ah dukaamada bixiya alaabta la beddeli karo - oo ka faa'iidaysanaysa adiga iyo macaamiishaada labadaba.
2. Ku dar Gallery Sawirka Alaabta kasta
Sawiradu waa waxyaabo awood leh - mana jirto meel ka run badan iibka. Macaamiishu waxa ay culays badan saaraan sawirka alaabta, iyaga oo u isticmaalaya go'aan muhiim ah oo go'aannada wax iibsiga ah. Dhab ahaantii, marka si fiican loo isticmaalo, sawiradu waxay kordhin karaan heerka beddelka guud.
Ugu yaraan, badeecad kastaa waa inay lahaataa sawirka aasaasiga ah, kaas oo aad ku dari karto Image image qaybta dashboardkaaga WordPress. Si kastaba ha ahaatee, waxaad sidoo kale aadi kartaa hal talaabo oo dheeraad ah, waxaadna ku dari kartaa sawiro buuxa adoo isticmaalaya Sawirka Muuqaalka qaybta:
Marka lagu daro sawirro badan waxay fulisaa waxyaabo badan. Waxay ka tusi kartaa badeecada dhinacyo badan iyo qaabab kala duwan, waxayna awood kuu siin kartaa inaad u muujiso labadaba isticmaalka iyo goob habaysan. Guud ahaan, bixinta gallery wax soo saarka waxay ka caawisaa macaamiisha suurtagalka ah inay helaan fikrad dhammaystiran oo ku saabsan waxa alaabtu u egtahay, iyo sida ay ugu haboonaan karto noloshooda.
Runtii abuurista gallery-ka alaabadaada waa mid fudud - kaliya waxaad gali kartaa sawir kasta oo aad rabto, oo dib u habayn iyaga markaad doonto. Muuqashada natiijada kama dambaysta ahi waxay ku xirnaan doontaa dulucdaada, laakiin waxay u badan tahay inay u ekaan doonto wax sidan oo kale ah:
Waxaa muhiim ah in la ogaado in aad rabto in sawiradani ay noqdaan kuwo asal ah (ie, ma aha sawir qaadis), iyo tayo sare leh. Si loo yareeyo saameynta galka warbaahinta badan ee waxqabadka dukaanka WooCommerce, sidoo kale waa fikrad wanaagsan inaad sare u qaaddo dhammaan sawirada aad isticmaasho.
3. karti oo maamul qiimaynta macaamiisha
Markaad ku qanciso booqdayaasha inay wax iibsadaan, sawiradu waa mid ka mid ah qalabkaaga ugu awooda badan. Si kastaba ha ahaatee, dib u eegista macaamiishu waa sida (haddii aysan ka badnayn) saameyn leh. Macaamiishu waxay dhigaan qadar aad u weyn oo muhiim ah dib u eegista iibsadayaasha dhabta ah, iyaga oo isticmaalaya iyaga si ay u qiimeeyaan in badeecadu u iman doonto sidii la filayo iyo in ay u shaqeyso sidii loogu talagalay.
Sidaa darteed, inta badan way fiican tahay in dadka loo oggolaado inay soo dhejiyaan faallooyinka alaabtaada boggaaga e-commerce. Waxaad ka heli kartaa doorashadan hoosteeda WooCommerce> Dejinta> Alaabooyinka:
Tani waxay kuu ogolaan doontaa inaad awood u yeelatid dib u eegista, oo aad sidoo kale go'aansato cidda soo dhejin karta. 'Milkiilayaasha la xaqiijiyay' waa isticmaalayaasha gudaha ku soo galay kuwaas oo ka iibsaday goobtaada. Inkasta oo doorashadani ay u badan tahay inay yarayso tirada guud ee dib u eegista, waxay kor u qaadi kartaa kalsoonida qaybtaada dib u eegista, maadaama dadku ay ogaan doonaan in faallooyinka macaamiisha midkoodna uusan ahayn spam ama been abuur ah.
Sida-ay tahay, nidaamka dib u eegista WooCommerce waa mid shaqeynaya laakiin aasaasi ah. Marka waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale rabto inaad tixgeliso hagaajinteeda, adoo adeegsanaya plugin sida Reviews Macaamiisha ee WooCommerce:
Ka dib marka la rakibo qalabkan, waxaad ku arki kartaa dhammaan faallooyinkaaga tab go'an, oo si fudud u maareyso. Intaa waxaa dheer, waxaad heli doontaa goobo badan oo kala duwan:
Tan ugu muhiimsan, waxaad dejin kartaa xasuusinta iimaylka oo ku dhiirigelinaysa macaamiisha inay soo gudbiyaan faallooyin. Waxaad xitaa shakhsiyayn kartaa fariimaha aad dirto. Tani waa hab aad u wanaagsan oo lagu helo qiimeyn badan boggaga alaabtaada.
4. Ku bixi Taageero Fudud adigoo isticmaalaya Chat Live ah
Haddii aad dhamaystirto hawlaha aanu ka hadalnay ilaa hadda, macaamiishu waa inay haystaan ​​inta badan macluumaadka ay u baahan yihiin si ay u doortaan inay rabaan inay wax iibsadaan. Ilaa hadda, qaar ka mid ah iyaga ka mid ah ayaa su'aalo weydiin doona. Sida ugu wanaagsan (iyo sida ugu dhakhsaha badan) ee aad u bixiso jawaabaha waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa waayo-aragnimadooda guud, iyo xitaa go'aanadooda wax iibsiga.
Dabcan, waxaad u baahan doontaa inaad bixiso foomka xidhiidhka ama bogga meel caan ka ah dukaankaaga. Tani waxay soo bandhigi kartaa hab dhaqameed lagula xiriiri karo, sida lambarada telefoonka iyo ciwaanada iimaylka. Si kastaba ha ahaatee, macaamiishu waa dulqaad la'aan, marka waa caqli badan tahay in la maro mayl dheeri ah marka ay timaado taageerada.
Habka ugu fiican ee taas loo sameeyo waa in la bixiyo sifo toos ah chat:
Tani waxay u ogolaan doontaa macaamiisha inay su'aalo weydiiyaan oo ay helaan jawaabaha isla markaaba - yaraynta fursadda inay si fudud uga baxaan dukaankaaga. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa sifadan si aad u kordhiso iibka, sida adigoo soo jeedinaya alaabada la xidhiidha.
Haddii aad rabto inaad ku darto wada sheekaysiga tooska ah dukaankaaga e-commerce, waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho plugin go'an. LiveChat ee WooCommerce waa meel wanaagsan oo laga bilaabo:
Kani waa ikhtiyaar u gaar ah WooCommerce, waana fududahay in la dejiyo oo la isticmaalo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa xusid mudan in inkastoo plugin laftiisa waa bilaash, aad doono u baahan tahay inaad iska diiwaan geliso adeegga LiveChat si aad u isticmaasho muddada dheer.
Taageerada WP Live Chat waa beddel bilaash ah oo la isku halayn karo:
Iyadoo aan si gaar ah loogu talagalay ganacsiga e-commerce, plugin-kan ayaa si habsami leh ugu dhex milmi doona goobtaada WooCommerce. Waxaa dheer, waxa ay ku siinaysaa dashboard-ka isticmaale-saaxiibtinimo halkaas oo aad ku arki karto oo aad ku maamuli karto wada sheekaysigaaga:
Goobaha, waxaad habayn kartaa sida habka wada sheekaysiga u shaqeeyo, oo aad u dejiso ogeysiisyada. Waxa kale oo jira nooca pro ee plugin-kan, kaas oo la socda hawlqabad dheeraad ah sida sahan iyo falanqayn. Xal kasta oo aad isticmaashid, waa muhiim inaad si degdeg ah uga jawaabto su'aalaha macaamiisha, oo aad ilaaliso xirfadle laakiin saaxiibtinimo leh dhammaan isdhexgalkaaga.
5. Bixi Ikhtiyaarrada Albaabka Lacag-bixinta Badan
Ilaa hadda, waxaanu eegaynay farsamooyinka ku dhiirigeliya dadka soo booqda inay garaacaan badhanka 'iibsiga'. Dabcan, shaqadaadu kuma eka. Macaamiil kasta oo suurtagal ah waa inuu si guul leh uga soo baxa habka hubinta, ka hor intaadan arkin natiijooyinka dhammaan shaqadaada adag.
Waxaa jira sababo kala duwan oo aad ku waayi karto macaamiisha bartamaha habka hubinta. Nasiib wanaag, WooCommerce waxay si toos ah u bixisaa nidaam la habeeyey oo si fudud loo isticmaali karo. Si kastaba ha ahaatee, geedi socod dheer ama jahawareer ma aha sababta kaliya ee macaamiishu uga tagaan gaadhiga – waxa kale oo laga yaabaa inay baxaan sababtoo ah ma bixinaysid albaab lacag bixin oo kugu filan.
Albaabka lacag-bixintu waa hab fudud oo lagu aqbali karo lacag bixinta goobtaada. Qof kastaa wuxuu leeyahay habab u gaar ah oo uu wax ku bixinayo alaabta internetka. Dadka qaarkiis waxay jecel yihiin inay isticmaalaan kaararka deynta, halka kuwa kalena ay ku dhegi karaan PayPal mar kasta oo ay suurtagal tahay. Ma bixin kartid albaab kasta oo lacag-bixineed oo ku yaal boggaaga, laakiin in ka badan oo aad taageerto, fursadaha badan ee macaamiishaadu waa inay ka doortaan.
Sida caadiga ah, WooCommerce waxay taageertaa PayPal, Stripe, xawilaadaha bangiga tooska ah, iyo lacag bixinta qad la'aanta:
Tani waa bilow wanaagsan, laakiin waxaad ku dari kartaa doorashooyin kale oo badan. Dhab ahaantii, dukaanka fidinta WooCommerce wuxuu leeyahay qayb dhan oo u go'an albaabada lacag bixinta:
Waxaa jira dhowr ikhtiyaar oo aad ku dari karto bilaash, sida Amazon Pay iyo Square. Albaabada kale waxay u baahan karaan lacag-bixin hal mar ah, ama waxay ku lug leeyihiin kharashyo kala duwan. Hubi inaad si taxadar leh u baarto goob kasta ka hor inta aadan saxiixin, si aad u fahamto shuruudaha iyo shuruudaha.
WooCommerce waxaa laga yaabaa inay fududaato in la dejiyo, laakiin ma rabtid inaad ku degdegto dukaamanka aasaasiga ah oo aad rajaynayso waxa ugu wanaagsan. Ku socodsiinta dukaanka e-commerce ee guuleysta wuxuu u baahan yahay qorsheyn, waqti, iyo ballan. Dhinaca wanaagsan, qaar badan oo ka mid ah xeeladaha ugu waxtarka badan ayaa fudud in la isticmaalo oo aad loo heli karo.
Haddii aad raadinayso inaad sare u qaaddo iibka WooCommerce, waxaad u baahan doontaa inaad ku bilowdo:
Muujinaya sifooyinka alaabta iyo kala duwanaanta.
Ku-daridda gallery-sawir badeecad kasta.
Awoodsiinta iyo maaraynta dib u eegista macaamiisha
Ku bixinta taageero sahlan iyada oo loo marayo sheeko toos ah.
Bixinta fursado badan oo albaabbada lacag bixinta ah.
Ma qabtaa wax su'aalo ah oo ku saabsan sida loo hirgeliyo hababkan boggaga WooCommerce? Noogu sheeg qaybta faallooyinka ee hoose!
Xuquuqda sawirka: CarolCarter.
10 Siyaabood Oo Aad Ku Horumarin Karto Baraha Bulshadaada Hal Saac ama Ka Yar
Sida Loo Sameeyo Website Aroos leh WordPress